dajụọ Rhino | Top Slot Site | Mobile & Online £5 FREE | £€$800 Bonus :)
Raging Rhino Slot dabeere African ọhịa isiokwu. WMS Gaming abịa na a dịtụ iche ụdị oghere nke awade ụfọdụ pụrụ iche atụmatụ. Ihe mbụ nke ga-abịa gị mara bụ na o nwere isii esi anwụde kama ọkọlọtọ ise. Mara mma African ọhịa ala e mere na ndabere nke na-akwado site na ụfọdụ n'ezie mara mma akara mmasị na a bit 3D style. na nke a na, niile ndị a na-esi anwụde nwere ike na-egosi na anọ ọnọdụ dị iche iche nke na-enye a ọtụtụ ụzọ iji merie.
dajụọ Rhino dị njikere na ubi
dajụọ Rhino awade isii esi anwụde tinyere ahịrị anọ nke na akara na 4096 ụzọ dị iche iche iji merie. Iji merie, unu na-eme kpọmkwem emeri n'ịgwa na n'akụkụ esi anwụde. Anwụ na-acha ndabere na backdrop na a music jupụtara anụmanụ ụda ga-rata gị na a njem ọhịa ala.
The egwuregwu nwere a adaka, a mongoose, ihe agu iyi na a enyí ọhịa dị ka ndị dị elu kpọrọ akara ebe ala ndị na-na-emebu kaadị akara 9, 10, J, Q, K na A.
The ọhịa akara a kọwara site a mara mma anyanwụ ọnọdụ n'azụ ihe African osisi na ọ na-egosi enweghị usoro na-esi anwụde abụọ, atọ, anọ na ise. Ọ nwere ike ịnọchi anya ihe ndị ọzọ nile na akara ọzọ karịa bonus akara nke bụ a nnukwu sachaa diamond na ọ ga-ịkpalite bonus feature maka. The Rhino akara na-akwụ ndị kasị elu ego na ọ ga-hụrụ stacked na niile na-esi anwụde.
Free spins na-naanị bonus nyere na dajụọ Rhino. Ọ ga-adị mfe triggered site ọdịda iche iche tent nke ndị a Diamonds na-esi anwụde. Ezie na ha kwesịrị dịkarịa ala atọ na ole iji ịkpalite dịkarịa ala bonus gị nke bụ asatọ spins, anọ diamonds, n'akụkụ aka nke ọzọ, ga-enye gị iri na ise spins, ise na-akwụ si iri abụọ spins na isii diamonds enye iri ise spins nke bụ ndị kasị elu ke egwuregwu. Ọ bụrụ na ị ga-enwe ike na-etolite a na-emeri Nchikota na a ọhịa akara, ọ ga-gi ba uba Enwee Mmeri site 2x ma ọ bụ 3X.
dajụọ Rhino bụ a ma ama oghere na nweela a ezi uche na-akwado-esonụ maka onwe ya ebe ọ bụ na ya mbụ ụbọchị. Ọ na-enye ndị kasị elu mmeri nke 12,000 nke na-adọta ndị mmadụ na-enye ya a hit. Ezie na ụfọdụ egwuregwu na-ahụ ya ihe ọma na-emebu payline Ọdịdị, ndị ọzọ ka na-eme na-enwe mgbanwe nke a oghere egwuregwu.